Hacked (2020) | MM Movie Store
ဆမျမီရာဆိုတဲ့ကောငျမလေးက ဖကျရှငျမဂ်ဂဇငျး အယျဒီတာတဈယောကျပါ…စှဲမကျဖှယျ ခန်ဓာကိုယျကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး သိပျလှတဲ့ကောငျမလေးဖွဈတဲ့အပွငျ လုပျငနျးပိုငျးမှာလညျးအောငျမွငျမှုရလတေော့ခုခတျေ Social Media ကိုလညျး လူသိမြားစဖေို့ နညျးလမျးစုံအသုံးပွုတတျတယျ…တဈနတေော့ သူမကိုကောငျလေးတဈယောကျက ကွှသှေားတယျ…
ဒီကောငျလေးက အသကျသာငယျပမေဲ့ အရမျးတျောတဲ့ဟကျကာတဈယောကျ…ပိုငျဆိုငျဖို့အတ်တတဈခုသာသိတဲ့ ဒီကောငျလေးဟာ သူအကြှမျးကငျြဆုံးဟကျကာပညာရပျတှနေဲ့စောငျ့ထိနျးအပျတဲ့လောကဝတျတှကေိုဘေးခြိတျပွီး နညျးမြိုးစုံသုံးကာ ဆမျမီရာကို လိုကျပါတော့တယျ…
ဆမျမီရာတဈယောကျကို ဒီကောငျလေး ဘယျလိုတှေ ခဉျြးကပျလဲ…သူခဉျြးကပျတဲ့နညျးတှကေရော ဒီကောငျမလေးအတှကျဘယျလိုခံစားရမလဲ…ကောငျမလေးကရော ဘယျလိုတှဖွေဈမလဲ…သူမကရော ဒီလိုမြိုးခဉျြးကပျတဲ့ကောငျလေးကိုဘယျလိုတုနျ့ပွနျမလဲ…
ဒီဇာတျကားက ဒီဘကျခတျေနဲ့အတျောလိုကျဖကျတယျလို့တောငျပွောလို့ရပါတယျ…မိနျးကလေးတှအေတှကျပညာပေးကားဖွဈသလိုဆောငျရနျရှောငျရနျလေးတှကေို ခပျမိုကျမိုကျပွသှားတာပါ….
ဆမ်မီရာဆိုတဲ့ကောင်မလေးက ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာတစ်ယောက်ပါ…စွဲမက်ဖွယ် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သိပ်လှတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်တဲ့အပြင် လုပ်ငန်းပိုင်းမှာလည်းအောင်မြင်မှုရလေတော့ခုခေတ် Social Media ကိုလည်း လူသိများစေဖို့ နည်းလမ်းစုံအသုံးပြုတတ်တယ်…တစ်နေတော့ သူမကိုကောင်လေးတစ်ယောက်က ကြွေသွားတယ်…
ဒီကောင်လေးက အသက်သာငယ်ပေမဲ့ အရမ်းတော်တဲ့ဟက်ကာတစ်ယောက်…ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတ္တတစ်ခုသာသိတဲ့ ဒီကောင်လေးဟာ သူအကျွမ်းကျင်ဆုံးဟက်ကာပညာရပ်တွေနဲ့စောင့်ထိန်းအပ်တဲ့လောကဝတ်တွေကိုဘေးချိတ်ပြီး နည်းမျိုးစုံသုံးကာ ဆမ်မီရာကို လိုက်ပါတော့တယ်…
ဆမ်မီရာတစ်ယောက်ကို ဒီကောင်လေး ဘယ်လိုတွေ ချဉ်းကပ်လဲ…သူချဉ်းကပ်တဲ့နည်းတွေကရော ဒီကောင်မလေးအတွက်ဘယ်လိုခံစားရမလဲ…ကောင်မလေးကရော ဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲ…သူမကရော ဒီလိုမျိုးချဉ်းကပ်တဲ့ကောင်လေးကိုဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ…
ဒီဇာတ်ကားက ဒီဘက်ခေတ်နဲ့အတော်လိုက်ဖက်တယ်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်…မိန်းကလေးတွေအတွက်ပညာပေးကားဖြစ်သလိုဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေကို ခပ်မိုက်မိုက်ပြသွားတာပါ….
Super Me – Link 3
ဆာမူရိုငျးမလေးဆာကူရာ – Link 2